Odayaasha iyo Waxgaradka Berbera Oo cambaareeyay Mudaharaadkii ka dhacay Magaaladda | Somaliland.Org
Odayaasha iyo Waxgaradka Berbera Oo cambaareeyay Mudaharaadkii ka dhacay Magaaladda
December 22, 2012	“Mudaharaadkaasi dan uma ahayn Magaaladda Berbera iyo bulshaddaba, dibna yaanay u dhicin”
Hargeysa (Somaliland.Org)- Waxgaradka iyo Odayaasha magaaladda Berbera ayaa shir jaraa’id oo ay galabta ku qabteen magaaladaasi waxay ku cambaareeyeen mudaharaadkii maanta ka dhacay Berbera ee lagaga soo horjeeday xilka qaadista Badhasaabkii hore ee Gobolka Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax). Waxaanay bulshada reer Berbera ka dalbadeen in meel looga soo wada jeedsado ilaalinta nabad-gelyadda.
Jaamac Aw Nuur Abyan oo ka hadlay shirkaasi jaraa’id ayaa bulshadda magaaladda Berbera u soo jeediyay inay ilaaliyaan Nabad-gelyadda isla markaana aan magaaladda lagu rabshin mudaharaad macno darro ah. “Waxaan leeyahay mudaharaadkani ummadda iyo magaaladda dan uma ahayne’e halaga noqdo. Waxaan leeyahay mudaharaadkan ninkii saaka ku jirayoow waxaan kaa codsanayaa inaad iska daysaan oo aad ka waantowdaan. Haddii ay tahay mid dan leh iyo mid aqoon la’aani u geysayba waxaanu idinka wacdiyaynaa inaad arrintaasi ka la iska daayo oo aan mudaharaad dambe lagu kicin,”ayuu yidhi Oday Jaamac Aw Nuur Abyan.
Oday Maxamed Faarax Kaahin oo isaguna cambaareeyay mudaharaadkaasi waxaanu tilmaamay inuu ka tacsiyadeynayo bulshadda, waxaanu yidhi “Mudaharaadkaas maanta ka dhacay Berbera waan ka tacsiyadeynayaa bulshada Somaliland koone ilaa koone. Wixii waxaasi geystay waa laga dabo-tagi oo laga hadhi maayo. Dadweynihii ka qeyb qaatayna waxaan leeyahay ka tanaasula.”
Xuseen Cismaan Geeddi oo halkaasi ka hadlay wuxuu yidhi “Waxaan leeyahay dadweynaha ninkii ilmihiisu ku jirayba ha qabsado oo haddii nabad-gelyo la waayo wax jirayaa ma jirayaan, cid walba waxa xil ka saaran yahay in la ilaaliyo nabad-gelyadda. Ilmaadeereyaal haddii waxani maanta dhaceen yaanay dib u dhicin.”
Daahir Yaasiin ayaa sheegay in mudaharaadkaasi uu fool xumo ku ahaa magaaladda Berbera oo uu tilmaamay inay xudun u ahayd nabad-gelyadda dalka, waxaanu bulshadda u soo jeediyay inay magac xumo ku tahay Gobolka.
“Wax la isku ogaa oo laga shiray may ahayn waana mid fool xumo ku ah, waa wax inagu soo kordhay oo aanu ka xun nahay haddii aanu nahay waxgaradkii magaaladda Berbera,”ayuu Daahir Yaasiin.
Waxa kale oo halkaasi ka hadlay Maxamed Cabdi Liibaan iyo xubno kale kuwaasi oo iyaguna cambaareeyay mudaharaadkaasi isla markaana bulshadda reer Berbera u soo jeediyay inay ka waantoobaan wax kasta oo saamayn xun ku yeelanaya nabad-gelyadda magaaladdaasi.
waxa iyaguna shirkan jaraa’id goob joog ka ahaa odayaashan Nuur Faarax Jaamac, C/laahi Aadan Guray, C/laahi Maxamed, Xasan Xuseen, Maxamed Cabdi Liibaan, Aadan Haybe Wacays, Baashe Maxamed Cabdilaahi, Xasan Xuseen, Jaamac Taarjiir, Shucayb Cabdi Cawaale, Axmed Faarax Gacmoole , Maxamed Cabdi Liibaan iyo Ismaaciil Cismaan Aadan indho.
Previous PostXukuumadda Dhexe Iyo Golaha Cusub ee Deegaanka Hargeysa oo kulan lagu kaftamay ku yeeshay HargeysaNext PostDad dano gaar ah leh ayaa doonaya inay dhantaalaan Horumarka Dugsiga Abaarso Tech	Blog